Tech Products to keep you productive for Work-From-Home | Work-from-home အတွက် မရှိမဖြစ်နည်းပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းများ – SUNNY Tech News
Posted byDaxDo 27th Oct 2020 28th Oct 2020 Posted inUncategorized
အခုလက်ရှိမှာ Work from home လုပ်နေရတဲ့သူတွေများလာပြီဆိုတော့ အလုပ်တွေကို အဆင်ပြေပြေနဲ့ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးမြောက်နိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ ကိုယ့်အိမ်မှာပဲ Home office လေးတစ်ခုဖန်တီးချင်ရင် ဘယ်လိုနည်းပညာပစ္စည်းတွေလိုအပ်မလဲဆိုတာကို ကြည့်လိုက်ကြရအောင်….
အိမ်ကနေအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်အဓိကအလိုအပ်ဆုံးပစ္စည်းကတော့ Laptop ဒါမှမဟုတ် Desktop တစ်လုံးဆိုတာ ပြောစရာတောင်လိုမယ်မထင်ပါဘူးနော်။ ရုံးလုပ်ငန်းတွေကို အချိန်မှီ ပြီးစီးနိုင်ဖို့အတွက် စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းပြီး ဈေးနှုန်းသင့်တင့်တဲ့ laptop တစ်လုံးလောက်တော့ ရှိထားသင့်ပါတယ်။
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့အချိတ်အဆက်မိမိအလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် team meeting နဲ့ group call တွေမှာ ထိထိရောက်ရောက်ပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ Noise-cancelling Headphone ကောင်းကောင်းတစ်ခုရှိထားရင် အိမ်ကလူတွေရဲ့စကားသံနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဆူညံသံတွေကို လျှော့ချပေးနိုင်လို့ အာရုံရှင်းရှင်းအလုပ်လုပ်နိုင်မှာပါ။
တစ်နေကုန်အလုပ်တွေလုပ်နေရပြီးခေါင်းမကြည်ရင် ကော်ဖီကောင်းကောင်းလေးတစ်ခွက်က သင့်ကိုလန်းဆန်းသွားစေမှာပါ။ အာရုံစူးစိုက်မှုကျလာတဲ့အချိန်တွေအတွက် ကော်ဖီဖျော်စက်တစ်လုံးတော့ ရှိဖို့လို့ပါတယ်။
Desktop နဲ့ပဲသုံးသုံး၊ Laptop နဲ့ပဲတွဲသုံးသုံး၊ အနားမှာကြိုးတွေရှုပ်ယှက်ခတ်နေရင် အတော်အာရုံနောက်ရပါတယ်။ Wireless Keyborad သုံးရင် ဒီပြဿနာမရှိတော့ပါဘူး။ ပြီးတော့ laptop မှာဆိုရင် built-in keyboard ကိုလည်း အနားပေးရာရောက်တော့ မပျက်တော့ဘူးပေါ့။ Wirless Keyboard မှာထည့်ဖို့ Long life Battery တွေတော့ အဆင်သင့်ဆောင်ထားပါ။
Laptop မှာပါတဲ့ Touch pad နဲ့ပဲသုံးရင် တိတိကျကျဆွဲရတဲ့ drawing တွေနဲ့ office work တွေကို အချိန်ကြာကြာလုပ်ရတဲ့အခါမှာ လက်ကောက်ဝတ်ကစပြီးညောင်းလာလို့ သိပ်ပြီးမြန်မြန်မလုပ်နိုင်တော့ပါဘူး။ productivity ကျလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်နေကုန် အလုပ်လုပ်စရာရှိတယ်ဆိုရင် wireless mouse နဲ့တွဲသုံးတာအကောင်းဆုံးပါ။ သက်တောင့်သက်သာရှိသလို အလုပ်လုပ်ရတာလည်း မြန်ပါတယ်။
တစ်ချို့ Laptop တွေမှာ Webcam built-in ပါပြီးသားဖြစ်ပေမယ့် resolutionသိပ်မကောင်းနိုင်ပါဘူး။ Online interview တွေဖြေရတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် client နဲ့ meeting လုပ်ရတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ရုပ်ထွက်ဖြစ်နေမှ အဆင်ပြေမှာပါ။ အဲ့ဒီအတွက် High resolution External Webcam တစ်လုံးလောက်တော့ဝယ်ထားသင့်ပါတယ်။
အလုပ်အတွက်လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေကို ရုံးမှာလိုမျိုး လိုတဲ့အချိန်မှာ office intranet ကနေယူလို့ရမှာမဟုတ်တဲ့အတွက် office data တွေအားလုံးကို External hard drive တစ်ခုသပ်သပ်ထားပြီး folder အလိုက်သိမ်းထားပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ Personal computer မှာထည့်ထားတာထက် ပိုပြီးလုံခြုံပါတယ်။
8. Multifunction printer
ရုံးလုပ်ငန်းတွေအားလုံးကိုအိမ်မှာပဲလုပ်လို့ရဖို့ဆိုရင် scan, copy, print function တွေပါတဲ့ printer တစ်လုံးကတော့ မရှိမဖြစ်ပါ။ ဈေးကွက်ထဲမှာ ဈေးအရမ်းမကြီးပဲ multifunction ရတဲ့ အိမ်သုံး printer လေးတွေထဲကနေ ရွေးချယ်ကြည့်ပါ။
အခုပြောပြထားတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ သပ်ရပ်ပြီး smart ကျတဲ့ home office တစ်ခုဖန်တီးထားမယ်ဆိုရင် ရုံးမှာအလုပ်လုပ်ရသလိုပဲ အလုပ်တွေကိုစိတ်ပါလက်ပါနဲ့ အမြန်ပြီးအောင်လုပ်နိုင်မှာပါနော်။
Work From Home အတွက်လိုအပ်သမျှကို SUNNY eSTORE မှာ အတန်ဆုံးစျေးနှုန်တွေနဲ့ ရှာဖွေလိုက်ပါ။